करियर « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
नर्सको लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन फारम खुल्ला
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नर्सको लाइसेन्स परीक्षाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ । आगामी चैत्र १२ गते हुने नर्सको नाम दर्ता अर्थात लाइसेन्स परीक्षाका लागि नेपाल नर्सिङ परिषद्ले सूचना
सुशान्तको सफलताको राज
सुशान्त मुरारका शारदा मेडिकेयर ट्रेडर्स प्रा.लि. र ट्रु डर्मा एसए प्रा.लिका सञ्चालक हुनुहुन्छ । ८ वर्षको अवधिमा उहाँ फूड सप्लिमेन्टस्, छाला र सौन्दर्य एवं इन्जेक्टेबल औषधिको बजारीकरणमा फड्को मार्न सफल
हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ जटिल मुटु उपचारमा
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । केही समयअघि ललितपुरको छम्पीमा बस्ने ४८ वर्षका एकजना सिंगापुरका लाहुरेलाई बिहानको समयमा ब्याडमिन्टन खेल्दाखेल्दै हृदयघात भयो । उनका साथीहरुले तत्काल अस्पताल पुर्याए । सिंगापुरमा बसेको र
सानै उमेर भएपनि रञ्जुको बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ प्रतिको लगाव र आत्मविश्वास निकै लोभ लाग्दो
बायोमेडिकल इन्जिनियर रञ्जु गौडेल अहिले नेशनल इलेक्ट्रोटेक प्रा.लि. (नेट) मा कार्यरत हुनुहुन्छ । ‘छोरीलाई अवसर दिएमा के गर्न सक्दैनन्’ भन्ने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो । सानै उमेर भएपनि
आकर्षण औषधि संवेदनशील क्षेत्र हो । यसमा धेरै प्रविधिहरुको प्रयोग गरिएको हुन्छ । नेपालमा अमेरिका, बेलायत, चीन र भारतमा जस्तै अत्याधुनिक प्रक्रियाबाट औषधि उत्पादन हुने गर्छ । यसरी नेपालमा औषधि
सुदिप पाण्डेको बायोमेडिकल इन्जिनियररिङ करियर: सानो उमेर ठूलो जिम्मेवारी
सुदिप पाण्डे हिमालयन मेडिटेकमा बायोमेडिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ । उहाँले ग्याँस्ट्रोलोजी, पल्मोनोलोजी र युरोलोजी विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । उमेरले २३ वर्षका पाण्डे आफ्नो कामप्रति एकदमै लगनशील हुनुहुन्छ । जनस्वास्थ्य सरोकारको
बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा अस्मिता कार्कीको करियर
डाक्टर र मेडिकल स्टाफले बुझ्ने भाषामा मेसिन चलाइदिएर बिरामी र डाक्टरको जीवन सहज बनाउने ब्यक्ति बायो मेडिकल इन्जिनियर हो । बायोमेडिकल इन्जिनियरले डाक्टर र मेडिकल स्टाफको मेडिकल भाषा बुझ्नुपर्छ ।
प्याथोलोजीमा डाक्टर पाठकको करियर
डा. राकेश पाठकले साइन्समा प्लस टू सकेपछि एक वर्षजति त्रिचन्द कलेजमा माइक्रोबायोलोजी पनि अध्ययन गर्नुभएको थियो । यसलाई छोडेर उहाँले सन् २००० मा काठमाडौं मेडिकल कलेजमा चौथो ब्याचका रुपमा एमबीबीएसमा
डा.आमिर सिद्धिक बल्खु स्थित बयोधा अस्पतालको क्रिटिकल केयर युनिटमा बिगत एक वर्षदेखि पूर्णकालीन रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले क्रिटिकल केयरमा एमडी गर्नुभएको छ । उहाँले बंगलादेशबाट एमबिबिएस गर्नुभएको हो ।
बिरामीको सेवामा पाइला
अस्पताल सञ्चालन गर्नु आफैंमा निकै चुनौतिपूर्ण काम हो । अन्य व्यवसायजस्तो तत्काल नाफा कमाउन सकिदैन । शुरुमा ठूलो लगानी हुन्छ तर प्रतिफल निकै न्यून । बिरामीको विश्वास जित्न लामो तपश्या
६ जनामा कोरोना संक्रमण, १३ संक्रमणमुक्त
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर थप ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
कोभिड लगत्तै अर्को नयाँ भाइरसको त्रास : नेपालमा मङ्कीपक्स फैलने सम्भावना कति ?
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । कोभिड महामारीको असरबाट अझै मुक्त हुनु भएको छैन भने एउटा नयाँ
जुम्लामा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स दुर्घटना
जनस्वास्थ्य सरोकार, जुम्ला। जुम्लामा एम्बुलेन्स दुर्घटना भएको छ। जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाबाट बिरामी ल्याउदै गरेको एम्बुलेन्स
सन् २०५० मा हाम्रो खानेकुरा: नक्कली केरा वा पन्डुनस फल
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । वैज्ञानिकहरूले सन् २०५० मा हाम्रो खानेकुराको अभिन्न अङ्ग बन्न सक्ने तर
उपत्यकाका यी ठुला अस्पतालले आइतबार पनि सेवा दिने
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन भए पनि उपत्यकाका